ne admin pane 21-10-15
ne admin pane 21-09-26
ne admin pane 21-09-23
ne admin pane 21-04-11
Zvakanakira kunwa nhema tii
ne admin pane 21-02-16
Vanoda tii vanofarira nhema tii vanofanira kuziva kuti nhema tii yakaviriswa uye yakabikwa, uye ine ine hunyoro kuravira uye yakapfava kuravira. Nyanzvi dzakati pane zvakawanda zvakanakira kunwa tii nhema. Semuenzaniso, mabhenefiti evakadzi vanowanzo nwira tii nhema ndeyekuti vanogona kutora chinzvimbo mune runako uye ...
Iyo yeChinese tii tsika
Shuige Village iri muHoshupian kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweBaimu Township, iri pamuganhu weJinhua Wucheng District kumadokero. Houshupian pakutanga aive Houshu Township, iyo yainzi "Houmu" kana "Muhoushu" munguva dzekare. Muna 1992, yakabatanidzwa muBaimu Township mushure me ...
[Kopa] Ungabika sei mukombe wakakwana wetii
ne admin pane 18-03-22
Inzwa kudzikama uye kuzorora patinonwa tii? Kunwa tii haisi chete yechinyakare kudya tsika, asi zvakare kune imwe mhedzisiro pakubvisa mahara radicals nekuti ine akasiyana antioxidant zvinhu uye antioxidant zvinovaka muviri. Naizvozvo, kunwa tii kunobatsirawo ...
[Kopa] Chinese Tea Tsika uye Nhoroondo
ne admin pane 16-10-15
Nhoroondo yeChinese Tea Iyo Nhoroondo yeChinese tii inguva refu uye zvishoma nezvishoma nyaya yekugadziridzwa. Zvizvarwa zvevarimi uye vagadziri vakagadzirisa nzira yeChinese yekugadzira tii, uye ayo akasiyana akasiyana wedunhu. Kunhonga Tea Mashizha Pickin ...
[Kopa] Yixing Nhema Tema
ne admin pane 15-05-11
Vanhu vazhinji vanoenda kuYixing kunotenga akakurumbira Zisha mapoto eti uko. Uye ipapo vangangodai kuwana tii, Yixing Nhema Tii. Ehe, Kufananidzwa nemukurumbira weYixing Zisha Tea Pot, Yixing Nhema Tiyi haina kunyanya kuzivikanwa. Asi ichokwadi chai yakanaka, sevazhinji cusotmers fi ...
Yixing Tema Tema
ne admin pane 12-02-14
Chinese Tea Tsika uye Nhoroondo
ne admin pane 08-12-12